DHAGEYSO: Puntland: Hadda iyo kadib waan ka madax bannaan nahay…! | Caasimada Online
Home Warar DHAGEYSO: Puntland: Hadda iyo kadib waan ka madax bannaan nahay…!
DHAGEYSO: Puntland: Hadda iyo kadib waan ka madax bannaan nahay…!
Garoowe (Caasimada Online) – Wasiirka Cadaalada, Diinta iyo arimaha dhaqan celinta ee maamulka Puntland Cismaan Maxamed Nuur oo ka hadlayay magaalada Garowe ayaa sheegay inta laga soo dhameystirayo dastuurka Federaalka , Puntland ay ahaan doonto dowlad ka madax bananaan Xukuumada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay mas’uulkaan in arimaha Puntland ay si gaar ah uga tashan doonaan waxgaradka,aqooyahanada iyo waliba shacabka reer Puntland iyagoona soo saari doonaan go’aan cad,sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkaan ayaa wasiirka wuxuu ka jeedayay kulan maanta ka dhacay Garowe ee looga hadlayay dhismaha Gudiga qabyo qoraalka xuquuqul insaanka Soomaaliya kaasi oo aan wali la ansixin.
Halkan ka dhageyso warbixin dhameystiran